मेडिकल कलेज आन्दोलन– प्रहरीद्वारा १५ विद्यार्थी पक्राउ | suryakhabar.com
Home पत्रपत्रिका मेडिकल कलेज आन्दोलन– प्रहरीद्वारा १५ विद्यार्थी पक्राउ
on: २६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:०७ In: पत्रपत्रिकाTags: No Comments
चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । कलेजविरुद्ध १३ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत विद्यार्थीमध्ये बुधबार १५ जना गिरफ्तार भएका छन् ।
के–के छन् विद्यार्थीका माग ?
शिक्षण शुल्कभन्दा बढी लिने शुल्कका बारेमा सम्बन्धन दिने त्रिविलाई जानकारी गराएर पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना नै निकालेको उनले बताए । ‘शिक्षण शुल्कभन्दा अरू केके शुल्क कति लिने भनेर हामीले पत्रपत्रिकामा नै सूचना निकालेर जानकारी दिएका थियौं,’ डा. हरिशले भने, ‘हामीले साढे ४२ लाखमा ६ लाखसम्म बढी लिएको छौं ।’
संसदीय समितिले बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता गर्न भनेको र त्यो शुल्क आउँदो शैक्षिक सत्रमा मिलान गर्न तयार रहेको उनले बताए । त्यसैगरी, शुल्कको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अनुगमन र अध्ययन गरेको हुँदा केन्द्रको प्रतिवेदन र सिफारिस पनि आफूहरूले मान्ने उनले बताए । ‘सरकारले जे निर्देशन दिन्छ त्यो मान्न हामी तयार नै छौं । यो आन्दोलन किन भइरहेको छ मलाई अचम्म लागेको छ,’ डा. हरिशले भने ।
तर आन्दोलन गरेर अस्पतालको सेवा प्रवाहमा बाधा हाल्ने, सञ्चालकलाई धम्की दिनेजस्ता गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी काम भएको अस्पताल प्रशासनले जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कान्तिपुर
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:०७